Ukukhulela epulazini kutshale uthando lwezolimo kosewumlimi epulazini likayise. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UNksz uTsakani Mhlongo, umsunguli weSwaTsakani Farming yaseTzaneen, eLimpopo
Ukukhulela epulazini kutshale uthando lwezolimo kosewumlimi epulazini likayise. Uxoxe noSIMANGALISO NTSHANGASE
IMPILO yokukhulela epulazini itshale imbewu yothando lwezolimo entokazini yaseTzaneen, eLimpopo, eqhubeke nomsebenzi kayise epulazini.
UNksz uTsakani Mhlongo, one-Degree in Corporate Communications yase-University of Johannesburg ngo-2009, usephethe izintambo eSwaTsakani Farming.
Uke wasebenzela izinkampani ezihlukene angathandanga ukuzidalula. Elanda ngothando lwakhe lokuba wumlimi, uthi: “Ngikhulele epulazini likababa ebelinabantu abebehlala kulona, abanye besebenza kulona. Loko kwenze ngakhula ngibona izinto eziningi ezithinta ezolimo.”
Uthi ngokuhamba kwesikhathi esephothule enyuvesi ingxenye enkulu yepulazi likayise yayingasanakwe muntu. Loko kwenza wathatha isinqumo sokuzibambela mathupha kuyona, yasunguleka kanjalo-ke iSwaTsakani Farming, ayibhalise ngokusemthethweni nyakenye.
“Ngabona ukuthi ipulazi alisanakwe muntu, ngase ngikhuluma nobaba ngamtshela ukuthi ngibona kufanele ukuthi ngizibambele mathupha kulona. Ngaqala kancane ngo-2018 ngitshala indawana encane, nokwathi uma kuqhubeka kahle, ngangabe ngisayeka,” kusho uNksz uMhlongo. ISwaTsakani Farming ikhiqiza izinhlobo ezihlukene zamaveji kuye ngezikhathi zonyaka.
UNksz uMhlongo nethimba leSwaTsakani Farming
Useqashe abantu abahlanu kanti ulekelelwa abakubo ukubheka ibhizinisi uma engekho.
“Sisebenzisana nezitolo zendawo neJohannesburg Market, esibathengisela amaveji ethu. Amanani emikhiqizo yethu ayehluka, awamile enanini elilodwa ngoba sixoxisana nesibadayiselayo ukuze kugcine kujabule wonke umuntu,” kusho yena.
I-butternut yeSwaTsakani Farming
Ezingqinambeni aseke wabhekana nazo ubalule ukuswela usizo lwemali, okuke kwenze ukuthi angalali ebusuku ecabanga izindlela zokuthi uzomisa kanjani ekupheleni kwenyanga ukuze izisebenzi zakhe zihole.
“Nezindleko zansuku zonke epulazini zimba eqolo. Okunye okubuye kuhluphe yinkinga yamanzi, ugesi nokuguquguquka kwesimo sezulu okuba nomphumela ongemuhle ezitshalweni,” kusho uNksz uMhlongo.
Uthi ukuba wusomabhizinisi kudinga isibindi, ukukwazi ukuthatha izinqumo ezinzima kanti akusiyo into yawo wonke umuntu.
Weluleke abafisa ukungena kwezolimo ukuthi kumele balungele ukuzikhandla nokungajahi ukusheshe benze imali. Ngokwezinhlelo ngekusasa, uthi ufisa ukungagcini ngokukhiqiza amaveji kuphela kepha agcine esenemfuyo, asevele ekuqalile.
Basheba ubungani nebhizinisi abanenkampani ekhiqiza i-pizza edle ngokuhluka. Baxoxe noZIMBILI MAZIBUKO
UMnu uMpumelelo Zikalala uchaza ngomphumela wesinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo esivune i-IEC